Chiba စီရင်စုရှိအလုပ်ခွင်တွင်းအလုပ် - အကယ်၍ သင်အလုပ်တစ်ခုရှာနေလျှင် [Genvers]
Chiba စီရင်စုတွင်အလုပ်ခွင်တွင်း ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုနှင့်အချိန်ပိုင်းအလုပ်အလုပ်များ
Chiba စီရင်စုတွင်အလုပ်ခွင်တွင်း ၀ င်ရောက်မှု
[၇၀ တင်ချက်များ] Chiba စီရင်စုနယ်တွင်အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့်အချိန်ပိုင်းအလုပ်ခေါ်ယူခြင်း။ဆောက်လုပ်ရေး၊ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများတွင်အဓိကထားသောအလုပ်အမျိုးမျိုးကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။သင်၏လက်၌အလုပ်တစ်ခုရပြီးသင်၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုကိုပြန်လည်လုပ်ဆောင်ပါ။Maruishi Kogyo Co. , Ltd. , Kato Equipment Kogyo Co. , Ltd. နှင့် Chiba စီရင်စုရှိအခြားလုပ်ငန်းခွင်အလုပ်များကိုတင်ထားသည်။
[Matsudo City] က Superman ကိုရည်မှန်းသည်။ပန်းချီ & ငြမ်း
[Kashiwa City] [Kashiwa] အလုပ်ရလိုသူများသည်ကြိုဆိုကြသည်
66 ကိစ္စChiba စီရင်စုမှာအလုပ်ရှိတယ်။ (၁-၃၀)
သင်ချက်ချင်းအလုပ်လုပ်နိုင်သည်!စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင်အလုပ်အကိုင်ပြောင်းလဲမှုကိုကြိုဆိုသည်။ ★အသက်ကြီးနေပြီ☆ ၁။ ကျွမ်းကျင်သောလုပ်သားများ / အထွေထွေလုပ်သားများ★အဆောင်ရရှိနိုင်သည် / ချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်း / သတ်မှတ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ you သင့်တွင်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုရှိလျှင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မည်။သင်နှင့်ကိုက်ညီသည့်အလုပ်တစ်ခုရှိပါသည်။ သင်လုပ်နိုင်သည် you အကယ်၍ သင်စိတ်ဝင်စားပါကစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
★☆ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလဲ။ဘယ်လိုအလုပ်ခွင်မျိုးလဲငါစိုးရိမ်တယ်! For ★☆★သင့်အတွက်♪အဘယ်ကြောင့်အတွေ့အကြုံအားဖြင့်ကုမ္ပဏီသို့မ ၀ င်ပါသနည်း★ everyone လူတိုင်းကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်မျှော်လင့်ချက်များပြည့်နှက်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။အားလုံးသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏မျက်လုံးနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်တွေ့ကြုံခံစားပါ။ဒီမှာပါကအေးမြ!မင်းလုပ်လို့ရလား !!ဒါပေမယ့်ကိစ္စမရှိပါဘူးသင်၏အရေးကြီးသောဘဝကိုထောက်ပံ့သောအလုပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်နေခြင်းကြောင့်သတိထားပါ။ Bus ★အလုပ်များပြီးကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်★။အလုပ်အတွက်အားလပ်ချိန်မရှိပါ ★☆ဤသည်မှာတစ်သက်တာအတွက်သင်၏လက်၌အလုပ်တစ်ခုရရန်သင်၏အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။သငျသညျအတွေ့အကြုံမရှိရင်တောင်, "လှုံ့ဆျောမှု" နှင့် "စိတ်အားထက်သန်" သူတွေကိုကျနော်တို့ကအစကတည်းက back up လိမ့်မယ်။ယခုမှစ။ "လက်၌အလုပ်များ" အရေးကြီးသောအချိန်ကာလတစ်ခုပါ!ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, "အလုပ်လွယ်ကူခြင်း" ကြီးမားတဲ့အချက်ပါ!၎င်းသည်အကျိုးရှိစေသည့်ကောင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည်စိတ်ချယုံကြည်ရသောယုံကြည်စိတ်ချရသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ ၀ န်ထမ်းများနှင့်သာစိတ်ရင်းမှန်၊
◆ကျွမ်းကျင်သောလုပ်သားများ (အထွေထွေအလုပ်များ) နှင့်အတွေ့အကြုံမရှိသူများ
◆ကျွမ်းကျင်သောလုပ်သားများ (အထွေထွေအလုပ်များ) နှင့်အတွေ့အကြုံမရှိကြသောသူများ၏နေ့စဉ်လစာ ၁၀,၀၀၀ ယန်းမှ ၁၂၀၀၀ ယန်း * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်။ စမ်းသပ်ကာလမှာ ၃ လဖြစ်သည်။ နေ့၊ အပတ်စဉ်ငွေပေးချေမှုစကားပြောခြင်း၊ ကြိုတင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုစနစ် ...
တိုကျို 23 ရပ်ကွက်နှင့်မြို့ပြareaရိယာ
Maruishi Kogyo Co. , Ltd. အလုပ်များဟုတ်လား
Suzuki Kogyosho Co. , Ltd. ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များဟုတ်လား
Nagumo Housing Co. , Ltd. အလုပ်များဟုတ်လား
Sadagumi Co. , Ltd. ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များဟုတ်လား
Tokatsu Kiko Co. , Ltd. ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များဟုတ်လား
Ikeda Nuriken Co. , Ltd.
[ပန်းချီဆွဲခြင်း] ဤသည်မှာသင်၏အရည်အချင်းကိုရရှိရန်သင်၏အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုကြိုဆိုသည်။ငါငယ်ရွယ်ပါဝါကိုမျှော်လင့်! !!
"Yaruki", "Aspiration" နှင့် "Enthusiasm" တို့နှင့်အပြုသဘောဆောင်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သောသူများ၏လျှောက်လွှာများကိုကျွန်ုပ်တို့စောင့်နေပါသည်။ # အတွေ့အကြုံမရှိကြသောသူများ၏ဗဟုသုတနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုရယူပြီးပြည့်စုံကောင်းမွန်သောပန်းတိုင်သို့တက်လှမ်းကြပါစို့။ ●ဗိသုကာပညာတွင်အတွေ့အကြုံရှိသူများကို ဦး စားပေးကုသမှု။အကယ်၍ သင်သည်အတွေ့အကြုံနည်းပါးပြီးဟာသဉာဏ်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်အားအစမှဂရုစိုက်သင်ကြားပေးမည်။ငါကြိုးစားခဲ့သမျှငါ့လခကိုငါပေးမည်။
[နေ့စဉ်လစာ] (လက်မှုပညာသူ) ယန်း ၁၃၀၀၀ နှင့်အထက် * ယခင်အလုပ်လစာ (အတွေ့အကြုံမရှိသူ) ယန်း ၁၀,၀၀၀ (သို့) ထိုထက်မက (အလုပ်သင်ကာလ - တစ်နေ့ယန်း ၉၀၀၀) ကိုစဉ်းစားပါ။
Kanto ဒေသတစ်ခုလုံးသည် Chiba စီရင်စုရှိ Ichihara City ကိုဗဟိုပြုသည် (စီးပွားရေးခရီးစဉ်များနှင့်အတူ)
Ikeda Nuriken Co. , Ltd. အလုပ်များဟုတ်လား
★ Genvers / အဆင့်မြင့်အရောင်း ၀ န်ထမ်းများ★ "စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကိုဆန့်ကျင်။ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည်အားကောင်းနေသည်။ ] နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သောပြည့်စုံသောကြော်ငြာအေဂျင်စီ!တိုကျိုအားကစားကဲ့သို့သောအလုပ်ကြော်ငြာမီဒီယာအမြောက်အမြားကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုင်တွယ်သည်။အရောင်းဝန်ထမ်းများခေါ်ယူခြင်း
★ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် Genvers / Upstage ၏တိုက်ရိုက်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါသည်။ အရောင်းဝန်ထမ်းများသည်အတွေ့အကြုံမရှိသူများပါ။စိတ်မပူပါနဲ့၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများကသင့်ကိုဂရုစိုက်ပါလိမ့်မယ်။စုဆောင်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်အတွေ့အကြုံရှိသူများကိုကြိုဆိုပါ၏။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်သင်၏ဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုအသုံးပြုပါ။
လစဉ်ယန်း ၂၄၀,၀၀၀ လစာသို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည် ・ ကော်မရှင်ရှိသည်။ အတွေ့အကြုံနှင့်အောင်မြင်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ဦး စားပေးကုသမှု * လေ့ကျင့်မှုကာလ (သင်တန်းကာလအတွင်း ၃ လ / လစာအတူတူ)
Ishihara အဆောက်အအုံ 2F၊ 13-7-3 Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo
Asunaro Hosou Co. , Ltd.ဟုတ်လား
[အတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူး] မင်းကိုအစကတည်းကသင်ပေးမယ်။ [အတွေ့အကြုံရှိသူ] အလုပ်များစွာ!သင်ငွေရှာနိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုရှိသည်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့မှာအလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ ငွေအများကြီးရနိုင်တယ်။ !!ကုမ္ပဏီသည်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများကိုအပြည့်အဝထောက်ခံသည်။ !!သင်အနာဂတ်၌သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိလိုပါက၊ သင်လွတ်လပ်ပြီးမကုန်မှီတိုင်အောင်သင်တို့၏အခြေခံနှင့်နည်းပညာများကိုသင်ကြားပေးမည်။
အတွေ့အကြုံရှိသူ - နေ့စဉ်လစာ ၁၂၀၀၀ ယန်း ~ အတွေ့အကြုံမရှိသူ - နေ့စဉ်လစာ ၉၀၀၀ ယန်း ~ * သင်တန်းကာလရှိပါသည်။
Kashiwa City, Chiba Suburbs, Tokatsu .ရိယာ
Tobi Hagiwara Co. , Ltd. ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များဟုတ်လား
Sasaki Heavy Machinery Co. , Ltd. ၏အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဟုတ်လား
Konsou Co. , Ltd. ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များဟုတ်လား
machine စက်လည်ပတ်ခြင်း၊ လက်မှုပညာကိုဖျက်သိမ်းခြင်း။
①အကြီးစားစက်ကိရိယာများနေ့စဉ်လစာယန်း ၁၆၀၀၀ နှင့်အထက်②ဖြိုဖျက်ခြင်းအလုပ်လစာ ၁၃၀၀၀ ယန်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို ၈း၀၀ မှ ၁၇း၀၀ တနင်္ဂနွေနှင့်အားလပ်ရက်များ GW နွေရာသီ / ဆောင်းရာသီအားလပ်ရက်များ★မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုလစာတိုးမြှင့်သည်။ ★အပိုဆုကြေး ...
[ရုံးခန်း] ၈-၂၂-၁၂ Soya, Ichikawa-shi, Chiba ■ Ichikawa ဘူတာ - ၂၅ မိနစ်ဘတ်စ်ကားဖြင့် Matsudo ဘူတာ - ၃၀ မိနစ် - Kitakokubun ဘူတာမှမိနစ် ၃၀ - ၁၅ မိနစ်လျှင်ခြေလျင် Akiyama ဘူတာ - ၂၃ မိနစ်၊ လမ်းဖြင့် ၁၁ မိနစ် - ကားဖြင့် ၁၁ မိနစ်။
Yamato Heavy Machinery Co. , Ltd. မှအလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုဟုတ်လား
Saito Kogyo Co. , Ltd. အတွက်အလုပ်များဟုတ်လား
[အဆောင်အပြီးသတ်] ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်!လုံခြုံရေး ၀ န်ထမ်းများခန့်အပ်ခြင်း (ကုမ္ပဏီသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းအတွက်ဂုဏ်ပြုသောငွေဖြင့်)
လုံခြုံရေး ၀ န်ထမ်းများ
(နေ့ဆိုင်း) နေ့စဉ်လုပ်ခ - ၉၀၀၀ ယန်း ~ (ညဆိုင်း) နေ့စဉ်လုပ်ခ - ၁၁၅၀၀ ယန်း ~ * သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုသီးခြားစီထောက်ပံ့ပေးထားသည်။
[ရုံး] ၃-၂၇-၈ Yawata, Ichikawa-shi, Chiba 3F အိမ်နီးချင်းinရိယာတစ်ခုစီရှိ Ichikawa-shi ကိုဗဟိုပြုသောနေရာများစွာ
Dolphin Co. , Ltd. ဂျော့ဘ်ဟုတ်လား
Shikimi Kosugi Co. , Ltd.
① Waterworks ဝန်ထမ်းများသည်လစဉ်လစာ ၃၅၀-၈၀၀-၀၀၀၀ ။မည်သို့ပင်ဖြစ်စေနောက်ခံမည်သို့ရှိပါစေ (၂) ယာဉ်မောင်း (အလယ်အလတ် ၂ တန်) လစဉ်လစာ ၁၈၀-၃၅၀,၀၀၀,35 အတွေ့အကြုံရှိသူများနှင့်အလုပ်သင်များ★ Blank၊ အခြားကုမ္ပဏီများ၊ လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးမှအလုပ်အကိုင်အပြောင်းအလဲတောင်းဆိုခြင်းကိုကြိုဆိုကြသည်★ကြွယ်ဝသောစီမံကိန်းများ၊ တည်ငြိမ်သော ၀ င်ငွေ!အလုပ်နှင့်ကစားခြင်းနှစ်မျိုးလုံးအတွက်တစ်သက်တာအလုပ်♪
(၁) ရေပေးဝေရေးစက်ရုံဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်း★အတွေ့အကြုံမရှိပါ (၂) ယာဉ်မောင်း (အလတ်စား၊ ၂ ထရပ်ကား) နှင့်အခြားဆက်စပ်သောအလုပ်★အတွေ့အကြုံရှိသူ / အလုပ်သင်ဖြစ်နိုင်သည်
[ကုမ္ပဏီ] (၁) ရေပေးဝေရေးစက်ရုံဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်း << အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦး စားပေးကုသမှု / အတွေ့အကြုံမရှိသူကိုကြိုဆိုပါ။ ◆လစဉ်လစာ ၃၅၀၀၀၀ မှ ၈၀၀၀၀၀ ယန်း②ယာဉ်မောင်း (အလတ်စား၊ ၂ ထရပ်ကား)၊
Koshigaya City၊ Saitama Prefecture၊ တိုကျို၊ Chiba ရပ်ကွက် ၂၃ ခုစသည်တို့ကိုဗဟိုပြုသည့်စီရင်စု၏အစိတ်အပိုင်းများ။
Kosugi Shikimi Co. , Ltd မှအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များဟုတ်လား
Flying Construction Co. , Ltd. ၏အလုပ်များဟုတ်လား
Daisho Construction Co. , Ltd. ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များဟုတ်လား
Kitamatsudo Sheet Metal Co. , Ltd.
အတွေ့အကြုံရှိသူ ၁၃၀၀၀ ယန်း ~ ၂၀၀၀၀ ယန်းအတွေ့အကြုံမရှိသူလူ ၁၀၀၀၀ ယန်း ~ * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်
၅-၉-၁ မင်ဒါ၊ မဆူဒိုစီးတီး၊ ချီဘ့စီရင်စုမစ်ဆူဒိုစီးတီး၊ ချီဘီစီရင်စု၊ ကရှီဝါနှင့်အခြားနေရာများ၊ အဓိကအားဖြင့်တိုကျို၏ဆင်ခြေဖုံးများ။
Kitamatsudo Sheet Metal Co. , Ltd. အတွက်အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ဟုတ်လား
Tobi Chiba Co. , Ltd.
☆★တစ်ခန်းတည်းပြည့်စုံပြီးပြည့်စုံသော★ outstanding ၎င်းသည်ထူးခြားသောတည်ငြိမ်မှုရှိသည့်အဓိကအိမ်ဆောက်သူတစ် ဦး ၏အလုပ်ဖြစ်သည်။ !! Dump driver ကိုအရေးပေါ်လူသစ်စုဆောင်းခြင်း !! သင်အလုပ်များစွာရနိုင်သည်။
●ဖောင်ဒေးရှင်းအလုပ် / ပြင်ပအလုပ် ၀ န်ထမ်းများ (၁) အတွေ့အကြုံရှိသူ (၂) အတွေ့အကြုံမရှိခြင်း●စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမောင်းသူ <တစ်ချိန်တည်းကန်ထရိုက်တာများခန့်ထားခြင်း>
●အခြေခံအုတ်မြစ်အလုပ် / ပြင်ပအလုပ် ၀ န်ထမ်းများနေ့စဉ်လုပ်အားခပေးချေမှု * တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်လိုအပ်သည်အလုပ်သင်¥ ၁၀၀၀၀ ~ အတွေ့အကြုံရှိသော¥ ၁၁၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀ ●မောင်းနှင်သူနေ့စဉ်နေ့စားခ¥ ၁၁,10,000 ...
[ရုံး] Wakaba ရပ်ကွက်၊ Chiba မြို့၊ Chiba စီရင်စု [ပစ္စည်းသိုလှောင်ခြင်း] ချိဘပြည်နယ်အနှံ့အပြား၊ Misato City, Saitama Prefecture နှင့် Saitama Prefecture နှင့် Tokyo တစ်ခွင်လုံးကိုဗဟိုပြုသည်။
Tobi Chiba Co. , Ltd. မှအလုပ်များဟုတ်လား
ကျွန်ုပ်တို့ကလှုံ့ဆော်ခံရသူများကိုသူတို့အတွေ့အကြုံမရှိကြရင်တောင်ကူညီသည်။အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦး စားပေးကုသမှု!မြို့လယ်မှာအလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ကလက်မှုပညာကိုရှာနေတယ်။
ဝန်ထမ်းပန်းချီ / အင်္ဂတေ
အတွေ့အကြုံရှိသူနေ့စဉ်လုပ်အားခ ၁၃၀၀၀ ယန်း ~ (သင်တန်းကာလအတွင်း) အတွေ့အကြုံရှိသူနေ့စဉ်လုပ်အားခယန်း ၁၀,၀၀၀ ~ * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်။
တိုကျိုရှိရပ်ကွက် ၂၃ ခုနှင့် Chiba / Saitama အနီးရှိနေရာတစ်ခုစီ
RWSML Co. , Ltd. ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များဟုတ်လား
Teijyu Co. , Ltd.
[၀ န်ထမ်းအင်ဂျင်နီယာများနှင့်လက်မှုပညာများကိုဆေးသုတ်ခြင်း / Teige Co. , Ltd. ] အတွေ့အကြုံရှိရှိပါစေကြိုဆိုပါတယ်။
[ကုမ္ပဏီ] သုတ်ဆေး ၀ န်ထမ်း [A] အလုပ်သင်
နေ့စဉ်လစာ ၁၀၀၀၀ ယန်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောငွေများ * အတွေ့အကြုံရှိသူများကိုအထူးဂရုပြုကုသမှု!
1-18-15 Sachi, Ichikawa-shi, Chiba Site: Chiba စီရင်စုတွင်တိုကျိုရပ်ကွက် ၂၃ စသည်တို့သည်ရုံးကို ဗဟိုပြု၍ (Ichikawa မြို့)
Teijyu Co. , Ltd. ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များဟုတ်လား
[Earthwork / Multi- ကျွမ်းကျင်သောအလုပ်] အားလုံးအတွက်လုံခြုံသည်။အသစ်တစ်ခုကိုစတင်ပါ။အဆောင်အသစ်ကိုတည်ဆောက်ပြီးအဆင်ပြေသောစတိုးဆိုင်ဘေးတွင်နေထိုင်ရန်လွယ်ကူသည်။ comfort ●သင်အဆင်ပြေစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး ၀ င်ငွေမြင့်မားပြီး ၀ င်ငွေမြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြင်ဆင်ပေးမည်။
①မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း (မြေကြီးလုပ်ငန်း) / အထွေထွေအလုပ် ၀ န်ထမ်း②ကျွမ်းကျင်သောအလုပ်ဝန်ထမ်းများ
နေ့စဉ်လစာ①မြေလုပ်ငန်း / ယန်း ၁၁,၅၀၀ (သို့) ထိုထက်ပိုပြီး (စမ်းသပ်ကာလ ၁ လ၊ ယန်း ၁၀၀၀) ②ကျွမ်းကျင်သောလုပ်သား / ယန်း ၁၃၀၀၀ (သို့) ထိုထက်ပို (စမ်းသပ်ကာလ ၁ လ - ယန်း ၁၁၀၀၀) * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ခြင်း ...
တိုကျိုအရောင်းရုံး] 4-3-22 Nishikoiwa, Edogawa-ku, Tokyo Maison Excel ပထမထပ် * "Koiwa ဘူတာ" မှ JR Sobu လိုင်း [Marui Construction Industry Co. , Ltd (Headquarters)] Chiba စီရင်စု၏လမ်းပေါ်မှ ၅ မိနစ်လမ်းလျှောက်။ ..
Sanyu ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် Ichihara အရောင်းရုံးအလုပ်များဟုတ်လား
Eiken House Co. , Ltd. ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များဟုတ်လား
မြေလုပ်ငန်း / အထွေထွေ (37)
Multi- ကျွမ်းကျင်လုပ်သား (10)
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ / ဗိသုကာ (64)
အလုပ်သင် / အတွေ့အကြုံမရှိသောကြိုဆိုခြင်း (55)
လူမှုဖူလုံရေးအပြည့်အ ၀ တပ်ဆင်ထားသည် (52)
သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေမှာ "Chiba စီရင်စုဒါဟာ "ဖြစ်ပါတယ်။